Sidee loo qoraaaa erayo jaceyl oo soo jiidasho leh?
Waxba haka welwelin erayojaceyl.com ayaa kuu fududeyneyso erayo jaceyl oo soo jiidasho leh.
Xagee ka helaaa geeraar jaceyl Oo cajiib ah?
Waa muhiim in aan barano geeraar jaceyl sababtoo ah waxaad ku soo bandhigi kartaa heerka uu jeceylkaadu la eg yahay.
Anigoo shukaansi barad ah ayaan isweydiiyaa tollow xagee ka heshaaa geeraar Jaceyl si,aad u kasbato qofta aad jeceshahay.
Waxaana ii fududeeyay erayojaceyl.com in aan maanta aqaano sida loo kasbado gabar kastaaa.
Waxaan xusuustaaa gabar walbaaa oo aan la hadlo Facebook iima soo jawaabto waana sababta igu kaliftay in aan wax ka barto erayojaceyl.com
Qaladaadka ugu badnaa waxa uu ahaaa anigoo isticmaalayay erayo gabdhuhu ay mar hore ka tageen sida Asc, Waan ku salaamay, Waad qurux badan tahay.
Erayadaas gabdhaha waxa uu qoro maalintii kumanaan nin, sababtoo ah Xabad walbaa oo shidan waxaa saf ugu jiro kumanaan nin oo lagaa yaabo qaarkood ay yihiin shandel naagood kuna xiranyihiin erayojaceyl.com
Hadaba Baro sida loo qoro erayo Jaceyl oo xikmad leh si, gabdhuhu ay saf kuugu soo galaan adoon ahay maalqabeyn ah oo aadan wax lacag ah iyo qurux toona lahayn. Erayada waxaa kamid ah....
Guurka waa nasiib, Furiinkuse waa go,aan
Murugtu waa nasiib, Farxaduse waa go‘aan
In Noloshadu qof ku jiraa , waa nasiib
In aad ilaashataa ama ka tagtaana
Waa go‘aan, Dhamaanteen nasiib Ma lihin
Laakin waxaan leenahay go‘aan.
Qalbi waxaa ugu wanaagsan qalbi aan aqoon ilaa run Maaahee.
Dadkana waxaa ugu wanaagsan dad aan kugu ilaawin maalmaha
Ha u ahaato murug maa farxad.
Ducana waxaa ugu wanaagsan Ducada laguu duceeyo adigoon ogeyn.
Hadii aan kuu dhoola cadeeyo oo aan waqtiyada murugada iyo dhibtaada ku garab istaago, taasi macnaheedu Ma ahan in aan ku ku jecelahay, ee waxaa ogaataa tarbiyada la igu soo barbaariyay ayaa waxey ahayd, in aan qofka dhibaateysan caawiyo, farxadna u muujiyo, midse ogow aniga qalbigeyga waa sida qasriga oo kale, qasrigana qof qaaliya ayaa dago, ee ma ahan sidii wabiga oo kale oo qof kastaaa iska soo maro, Midaasna waa in aad ogaataa.
Waxaa taqaanaa magaceyga oo kaliya laakinse Ma taqaanid dabeecadeyda, waxaa taqaanaa muuqaalkeyga laakinse Ma taqaanid waxa qalbigeyga ku jira. Waxaad aragtay dhoola cadeynteynteyda laakin Ma garaneysid sababta ka danbeysa dhoola cadeyntaas marka marnaba ha isku dayin adoon aqoon waxa ka danbeeya wax walbaa in aad xukmiso waxa aad korka ka arkeyso.
Waxa ugu quruxda badan ee la helo nolosha ayaa ah Jaceyl, haduusan jirinna noloshu macno malahan. Mararka qaar noloshaada waxaa ku soo biiri doono qof kaa jeclaan doono wax walbaaa, farxadaaduna ay tahay farxadiisu, ilmadaaduna ay dhibeyso, haduu qofkaasi noloshaadu ku jiro ilaasho, noloshaadu waa qaali.
Ogow qof walbaaa kuma farxadgelin karo ilaa qof qalbigaada dagay mooyee.
Subixii ma ubaahni inaan saacadeyda ku xirto alarm si aan u kaco, maxaa yeelay waxaad ku dhex nooshahay wadnaheyga gudihiisa waaga markuu baryo waxaad u toostaa inaaad quraac noo sameyso markaad wadnaheyga ka soo dhex toosto ayaan aniguna toosaa taasi ayaa alarm ii ah.
Teleefanka aan message-ka kaaga soo diro xili walbo wuxuu u baahanyahay inaan magacaga ku qoro oo aan kuusoo diro, sida dhulka ugu baahanyahay roob teleefoonkana ugu baahanyahay jaajar ayuu jaceylkeenana ugu baahanyahay waraabin joogto ah.
Waxaa inoo dhaxeeyo badweyn, buuro, iyo bari aad u dheer, anigu maahi dabeyl lakin hal sikin isii waxaan kuusoo dirayaa jaceylkeyga, oo aan soo gooynayaa inta dhul ee noo dhaxeyso, waanba kuusoo diray maheshay xabiibi.
Roobku markuu da”ayo macquul maahan inaad aragto qoraxda, balse xasuusnoow waa halkeedii oo kama maqno, anigana
waxaan filayaa anagoo kala fog indhaha aaysan isqaban Karin, hadana weli inaan halkeenii nahay.
Marna ma arki kartid sida aan kuugu xiisay.
Marna ma ogaan kartid sida aan kaaga
taxadaro, marna madareemi kartid sidaan kuu jeclahay, waxyaabahaas dhan si aad u ogaato wadnaheyga ayey ku dhexjiraan makuu dilaaciyaa si aad u ogaato wax walbo.
Hadii aan ku dhaho waan fiicanahay beri waxaa dhici karto inaan ku dhaho mafiicni hadii aan kulano waxaa ku xigto inaan hadane kala tagno, lakin waxaa mar waliba aan ku dhihi karaa waan kuuxiisay, maxaa yeelay si joogto ah aan is badal laheyn ayaan kuugu xiisaaa.
Markuu qof si xad dhaaf ah kuu jeceyl yahay waxaad ka qaadaa ad adeyg, balse markaad adigu si xad dhaaf ah qof u jeceshahay waxaad ka qaadaa dhiiro gelin
aan dhamaad laheyn Ma ogtahay 3 eray oo aad i dhahdo adigoo indhaheyga eegayo in aan ku dareemayo inaan ahay qofka aduunka ugu nasiibka badan “Waan Ku Jeclahay” Sadaxdaas Eray nolosheyda wax weyn beey ka badalaan ee haka daalin mar walbo inaad dhagta iigu dhibciso.
Jaceylku Iyo dabeyshu waa isku mid waa labo sheey oo jirku dareemo, balse maahan shey gacanta lagu qaban karo, ama la taaban karo.
Mar Weliba aad Fariin iisoo dirto waxaan ku xafidaaa qalbigeyga, mar waliba aad i eegto waxaan ku keydiyaaa xusuusteyda, Eray walbo aad i tidhaado waxaan u gudbiyaaa maskaxda, adiga iyo ficiladaada waa kuwo ku weyn nolosheyda.